DEGDEG: Hogaamiyihii Al-shabaab ee Banaadir oo dowlada gacanta ku dhigtay – Balcad.com Teyteyleey
Horjoogihii Al-Shabaab u qaabiHorjoogihii Al-Shabaab u qaabilsanaa dhibaataynta Shacabka magaalada Muqdisho ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidanka Ammaanka, sida uu xaqiijiyay wasiirka Amnigalsanaa dhibaataynta Shacabka magaalada Muqdisho ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidanka Ammaanka, sida uu warbaahinta qaranka u xaqiijiyay wasiirka Amniga.
Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaanan faah faahin intaasi dheer aanan ka bixin arrintaan laakiin waxaa lagu wadaa in goor dhow dowladdu ay shaaciso horjoogahaan magaciisa iyo halka Ciidanka Ammaanka ay ka qabteen.
Mudooyinkaan danbe ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka socday Howlgalo ay wadeen ciidamada Amaanka ee loo xilsaaray Xasilinta Caasimadda dalka, waxaana ay ku guuleesteen inay ka hortagaan dhibaatooyin badan oo Argagixisada ay la maaganaayeen shacabka dagan magaalada Muqdisho.
The post DEGDEG: Hogaamiyihii Al-shabaab ee Banaadir oo dowlada gacanta ku dhigtay appeared first on Ilwareed Online.
Ciidamada Xoogga dalka oo gurmad u fidiyay qoysas degan agagaarka madaxtooyada